Ushe wangqongqa umuzi eMpumuza | News24
Ushe wangqongqa umuzi eMpumuza
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Ushe wangqongqa umuzi wakwaNdlela eMpumuza.
USALE dengwane umndeni wakwaNdlela eMpumuza emva komlilo oqubuke kwelinye lamagumbi ezindlu wabe sewunabela endlini yonke enamagumbi amane.
Lo mlilo ugqamuke ngehora lesishagalombili ngoLwesihlanu olwedlule ekuseni ngesikhathi umakhi wendlu ematasatasa efaka uphahla lwendlu, kusho uMnu Zamo Ndlela ilunga lomndeni. Kumanje lo mndeni uquba komakhelwane ukuze ukwazi ukuthola indawo yokulala.
Ngokuchaza kuka Ndlela, umuntu obekhona ngesikhathi kwenzeka lesi sehlakalo umakhi wendlu enye ebiyakhiwa nayo enamagumbi amane abehlanganiswa nalawa amanye amane ashile. Uthe le ndlu isiphelele ibinamagumbi ayisishagalombili esewonke.
“Okwenzekile ukuthi kushe amagumbi amane kanye nayo yonke into ebiphakathi kuwo wonke amagumbi. Impahla eshile ilinganiselwa ku-R70 000. Okubuhlungu ngalokhu ukuthi akekho owaziyo ukuthi ngabe yini imbamgela yomlilo ngaphandle kokuthi kuvele kwaqubuka umlilo kwelinye lamagumbi obe usekubhebhethekela kulawa amanye amathathu nawo ashe angqongqa.
Ekhishini kushe yonke into, okubalwa isitofu sokupheka, ifiliji, amabhodwe izitsha kanye nayo yonke into ebiphakathi ekhishini. Ngokunjalo nakwamanye amagumbi akuzange kuphume lutho, kushe yonke into nezingubo zokugqoka. Lokho kudale ukuthi sigcine sisele nezinto esizigqokile kuphela emzimbeni.
“Singamalunga omndeni ayisihlanu kanti kukhona nabantwana besikole abakhona phakathi kwethu nabo kumamanje abanenkinga futhi abashelwe yiyo yonke into yokugqoka. Kwasha kwaze kwasha nezingubo zokulala, ayikho into eyakwazi ukuthi iphume ngoba umlilo wawusha ubulangulangu. Abantu abacisha umlilo bacisha baze baphelelwa amanzi ngendlela ilangabi elalidla ngayo amagalani,” kuchaza uNdlela.
Uthe ekuqaleni bebekholelwa ukuthi imbangela yalo mlilo kwaba ugesi kodwa uthi lokhu kubonakala kungesikhona lngoba isigubhu sikagesi asikhombisi ukuba wumsuka wakho ukusha.
“Isugubhu sikagesi akukho esikukhombisa njengomsuka wokusha. Kwasona isigubhu sikagesi asishile. Kwaba yinhlanhla kakhulu ukuthi akekho umuntu owasha noma owalimala ngenkathi kwenzeke lokhu.
“Esikucelayo usizo olungavela noma kumuphi umuntu. Sifisa ukuthi indlu yethu eshile ivuswe futhi sicele noma ubani ongalula isandla noma ngabe ngaluphi usizo ukuthi asisize ngoba asinalutho ngisho izimpahla zokugqoka. Okubuhlungu nami sengiphelelwe itoho,” ezikhalela uNdlela.
Ongafisa ukusiza lo mndeni angashayela ucingo uNdlela kwinombolo: 073 301 2227